ထမင်းအိုး: မိုးကောင်း တိုးပူးသုပ်
ဒီနေ့ညနေတော့ မိုးကောင်းတိုပူးသုပ်လုပ်စားလိုက်တယ်။ ပုံရည်ကြီးထမင်းသုပ်ပဲ ညနေစာပါ ဆက်သုပ်ပေးရင်ပြောတော့ မည်။ ဒီတော့ တမျိုးတဖုံပြောင်းလုပ်ရသည်။ မနေ့ကကျိုတဲ့ တိုပူးတုံးလဲကျန်သေးတယ်ဆိုတော့ အလွယ်တူတကူ တိုပူးသုပ်လုပ်စားဖြစ်သွားတာပါ။ ကျန်ရဖန်ရ အိမ်ရှင်မဘ၀ ။ ဟဲဟဲ
မြီးရှည် (နန်းကြီိးဖတ်ကိုလုပ်လဲရပါတယ်။ ဒီမှာတော့ Laksa ဆိုပြီးဝယ်ခဲ့တာပါ)
မက်လင်ဖတ်ခြောက် ၇ ဖတ်ရေနွေးနဲ့စိမ်(သို့) ရှာလကာရည်
ကြက်သွန်ဖြူ ၂ တက်ကိုထောင်း
ကြာညို့ (နောက်တမျိုးခေါ်တာ ပဲငံပြာရည်အနှောက်လို့ခေါ်လားမသိဘူး)
သုပ်မယ့်ပန်းကန်ထဲသို့ မြီးရှည်ထည့်၊ တိုပူးတုံးကို ပါးပါးလှီးထည့်၊ မက်လင်ခြောက်ဖတ်အချဉ်ရည်ထည့်၊ ပါးပါးလှီးထားသော နံနံပင်ထည့်၊ ထောင်းထားသော ကြက်သွန်ဖြူထည့်၊ မြေပဲဆံထောင်းထည့်၊ ကြာညို့ထည့်၊ စောကောဆီချက်ထည့်၊ ကြက်သွန်နီကြော်ထည့်၊ ဆား၊ အချိုမှုန့်၊ ငရုတ်သီးလှော်ထောင်းထည့်ပြီး နယ်စားပါ။
ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်လေးနဲ့ မိုးကောင်းတိုပူးသုပ်ပါ။ သုံးဆောင်သွားပါအုံးလား။
(ဆိုင်တွေမှာတော့ နံနံပင်နဲ့ကြက်သွန်ဖြူကို ရေဖျော်ထားတတ်တယ်။ ဘာလို့လဲတော့မသိပါ။ ကျွန်မကတော့ တခါတည်းသုပ်စားတာဆိုတော့ ရေမဖျော်ဘဲ တခါတည်းသုပ်စားလိုက်ပါတယ်။ မိမိစိတ်ကြိုက်သုပ်စားနိုင်ပါတယ်)
Posted by မိုးကောင်းသူ at 11:50 PM
Labels: ဒီလိုလေးတွေလုပ်စားရအောင်, မိုးကောင်းအစားအစာလေးများ, အသုပ်လေးများ
Martha I . Saavedra said...
No tengo ni idea que diga... pero se ve... delicioso !!!!!
Muchas gracias. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
ပဲရွက်လေး ထည့်ရင် ပိုကောင်းတယ်နော်....
Wai Mar Nyunt said...
တိုဖူးလုပ်နည်းလေး သိချင်ပါတယ် ကျေးဇူးပါ
တိုဖူးလုပ်နည်းလေး မျှဝေပေးပါလား ကျေးဇူးပါ